प्रवास : समुद्रमा डुबेर कतारमा १ नेपालीको मृत्यु – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २७ श्रावण सोमबार ०९:४०
प्रवास : समुद्रमा डुबेर कतारमा १ नेपालीको मृत्यु
एजेन्सी, दोहा । कतारमा एक नेपाली युवाको ज्यान गएको छ। समुद्रको किनारमा पौडी खेलिरहेको बेला सामुद्रिक छालले तानेर डुब्दा धनकुटाका ललित लिम्बुको निधन भएको हो । लामो समयदेखि कतारलाई कर्मथलो बनाएका लिम्बु सामाजिक काममा निकै सक्रिय थिए । धनकुटा समाज कतारको पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकारसमेत रहेका लिम्बु दोहामा क्रियाशील अन्य नेपाली सामाजिक संघसंस्थामा पनि आवद्ध थिए । उनको अकल्पनीय निधनले अहिले कतारवासी नेपाली स्तब्ध भएका छन्।
कतारमा कहाँ कहाँ छ समुन्द्री किनारा ?
कतारमा परिवारका लागि र सार्वजनिक गरेर जम्मा ६ वटा (बढी प्रयोगमा) समुन्द्री किनारा रहेको छ । यो छुट्टि मा समुन्द्र घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने यो जानकारी तपाइलाई काम लग्न सक्छ ।सिमाइस्मा दोहाको उत्तरी भागमा अवस्थित अल दाइन नगरपालिकामा रहेको छ। यो गाउँ सन् १९३८ मा स्थानीय माझी बाट बनाइएको हो। यो अल खोर हाइवे बाट मज्जाले देख्न सकिन्छ। दोहा बाट ४४ किलोमीटरमा रहेको यस बीचमा समुन्द्री किनारको बालुवा भिजेर चिप्लो हुने हुँदा बच्चाहरूको लागि खेल्न रमाइलो हुन सक्छ।
PREVIOUS Previous post: आज साउनको अन्तिम सोमबार : देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो
NEXT Next post: प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश फर्किँदै
भोलि १० बजेपछि रबि लामिछाने छुट्दै ! वकिलले भने ‘गल्ति सालिकरामकै छ’ 3,696 views